3 Siyaabaha kaabta iPod xiriiri 5 hor Casriyaynta in macruufka 8
3 Siyaabaha kaabta iPod xiriiri 5 hor Casriyaynta in macruufka 9/8
Save badan oo muhiim ah photos, music, playlists, filimada aad iPod xiriiri 5, oo hadda aad u muuqdaan in la gaarsiiyo in macruufka 9/8 laakiin boos aan ku filnayn? Sida aad ogtahay, la xariirta in macruufka 9/8 la Ota ama la Lugood u baahan yahay dhowr GB oo lacag la'aan ah lagu kaydiyo. Si aad u hagaajinta guul, aadka u tahay in aad talinayaa in ay gurmad aad iPod xiriiri 5 haddiiba ay wax ku dhacaya iyo xayuubiyay ah oo xog weyn. Markaas, aad tirtirto karo files aad iPod xiriiri 5 oo bilaash ah ilaa meel ku filan. Laakiin sidee aad gurmad iPod xiriiri 5? Joojiyaan walwal ilaa halkan. Tani waxay halkan article diiradda saarayaa kuu sheegaysa 3 siyaabood oo wax lagu taabto gurmad iPod. Akhri.
Jidka 1. Sida loo kaabta iPod xiriiri 5 la Lugood
Jidka 2. Sida loo kaabta iPod taaban 5 ilaa iCloud
Jidka 3. Sida loo kaabta iPod xiriiri via MobileTrans
Is barbar dhig ku 3 Hababka Kor
Marka ay timaado in ay taageerto kor u iPod xiriiri 5, Lugood waa hore u iftiimiyo maskaxdaada. Indeed, Lugood ku siinayaa awood ay ku raad raac xogta ugu badan ee aad iPod xiriiri 5
Waa maxay Lugood taageeray ah: waxaa ka mid ah Camera Roll, xisaab-mail, xiriirada, xiriirada iyo jecel, jadwalka taariikhda, Safari, autofill, khasnado / database, qoraalada, soo wac taariikhda, fariimaha, farriinta, cadaymaha cod, goobaha network, keychain, xogta codsiga dukaanka app, goobaha codsiga, wallpapers, doorbidida adeega goobta, rakibay profiles, khariidado iyo kaabidda jeedin badbaadiyey iyo ka badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa karin gurmad audio aan iibsaday iyo video, iyo sawiro ku Library Photo ah.
Waxa aad u baahan tahay,
iPod xiriiri 5
An Apple USB cable
Tallaabooyinka lagu kaabta iPod xiriiri 5 ilaa Lugood
Tallaabada 1. Isku aad iPod xiriiri 5 ilaa computer la cable USB ah.
Tallaabada 3. galeeysid bidix ee Lugood, guji si aad iPod xiriiri hoos AALADAHA . Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax iPod guddi ay gacanta ku taabto oo Midigta.
Tallaabada 4. In tab Kooban, u tag qaybta hayaan ah. Riix Back Up Now .
Haddii aadan rabin in qof kasta oo kale in ay helaan faylka gurmad ah, aad u sir karo. In qaybta gurmad, sax sir aad iPod taabto. Fadlan badbaadin sirta ah, ama aad leedahay si aad qotomisay ah iPod xiriiri cusub marka kalimo soo celinta ka gurmad ah.
Apple iCloud waa hab kale oo si xor ah u gurmad iPod xiriiri 5. Waxaa kor u taageeray iibsiga taariikhda music, filimada, bandhigyada TV iyo buugaagta, sawirrada iyo videos in Roll Camera ah, goobaha qalab, screen guriga, iMessage, ringtones, farriinta muuqaalka ah on your iPod taaban.
iCloud la kaydinta ku filan
Talaabooyinka in gurmad iPod xiriiri 5
Tallaabada 1. noqda on network WiFi aad iPhone.
Tallaabada 3. Tubada Kaydinta & kaabta > kaabta Hadda .
Kaabta iPod music, video, sawiro, xiriirada iyo iMessages 1 click!
Kaabta audio aan iibsaday iyo video iyo sidoo kale kuwa ku iibsaday on iPod xiriiri 5.
Kaabta iPod xiriiri 5 Photo Library iyo Roll Camera in computer.
Kaabta iPod taaban 5 xiriir la cinwaanka guriga, email, magaca shirkada iyo faahfaahin dheeraad ah info.
IMessages dhoofinta on iPod taaban 5 ilaa computer u gurmad.
Si fiican u shaqeeyaan iPod xiriiri 5 in ku ordi macruufka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. orod Wondershare MobileTrans kombiyuutarka. In ay suuqa kala aasaasiga ah, u tag dib My Phone hab. Markaas, xiriiriyaan iPod xiriiri 5 ilaa computer via cable USB ah. Ka dib markii la ogaado, aad iPod xiriiri 5 muujinaysaa ilaa bidixda ee suuqa kala gurmad.
Fiiro gaar ah: Lugood waa in lagu dhejiyaa si loo hubiyo in si sax ah Wondershare MobileTrans shaqada.
Tallaabada 2. In dhexe ee suuqa, sax faylasha aad rabto in aad gurmad. Guji Start Copy in gurmad aad iPod taaban 5 ilaa computer. In geeddi-socodka oo dhan, hubi iPod xiriiri 5 xiran yahay.
Tallaabada 3. By default, ee iPod xiriiri 5 gurmad file waa la badbaadin doonaa jooga meelaha soo socda.
In Windows OS: C: \_ Users \_ Maamulaha \_ Documents My \_ _1_698_1 _ \_ _ 1_683_1_ \_ kaabta
Mac: ~ / Document / MobileTrans
Faa'iido 1. Free
2. Kaabta ugu iPod xiriiri 5 xogta 1. Free
2. Computer ma u baahan tahay
3. Xog badan ee kaabta in hadhaysaa 1. 1 click in gurmad iPod xiriiri 5 aan Lugood
2. Kaabta audio aan iibsaday iyo video
3. Camera kaabta Roll oo Photo Library
Qasaarooyinka 1. Qaado waqti aad u badan
2. Ma awoodo in uu gurmad audio aan iibsaday iyo video
3. Ma awoodo in uu gurmad iPod xiriiri 5 Photo Library 1. Ma u baahan tahay shabakad WiFi on iPod xiriiri 5
3. Waa in lagu keydiyo oo ku filan in server daruur.
4. Ma awoodo in uu gurmad iPod xiriiri Photo Library 1. Ma aha lacag la'aan ah
2. Ma aan gurmad goobaha, wallpaper, thinking screen, iwm
Top 5 Talooyin in ay dardar macruufka 8
Faylal ay ka Old iPhone wareejiyo iPhone 6
3 Siyaabaha Bedelka Android inay iPhone 6
Sida loo dayactir iPhone White Screen of Death
Bedelka Photos ka iPhone in Computer
Bedelka iPod Music inay iPhone
15 Waa in-leeyihiin Apps ee macruufka 8
Samsung wareejiyo iPhone 1 Click
Sidee inuu ka soo kabsado Data ka ah iPod xiriiri Broken
Sida loo saar Podcast on iPod
Top Siyaabaha Waraaqda Music ka iPod ah
Sida loo Beddelaan iyo saar Videos on iPod
Sida loo saar Music on nano iPod
> Resource > iPod > 3 Siyaabaha kaabta iPod xiriiri 5 hor Casriyaynta in macruufka 9/8